Mafuta "Levomekol" panguva yepamuviri
Nekutora kweiyo nyowani chinzvimbo chemukadzi ane nhumbu, bonde rakanaka rinomutsiridza mararamiro ake. Nekudaro, vanaamai vazhinji vanotarisira vanotanga kunyatso tarisa kudya kwavo uye hutano. Nekudaro, se ...
Midzanga yemagetsi "Pons": mirayiridzo yekushandisa, maficha, wongororo
Vazhinji vanosvuta, vachishuvira kuita yavo tsika ive yakachengeteka sezvazvinogona ivo ivo nevakavakomberedza, votendeukira kune emagetsi emagetsi emagetsi. Mazuva ano, iyi isiri nzira inozivikanwa iri kuwedzera kuve inozivikanwa. Zvakanaka ...
Nhasi, vazhinji havazive kwekuenda kunovhenekwa kurapwa kwechiremba. Muchokwadi, pane maviri chete akakodzera sarudzo: makiriniki eruzhinji uye epachivande ekurapa nzvimbo. Nezve makiriniki ehurumende Ivo vese vane ...
Makumbo ezasi (makumbo) anotakura mutoro wakakura chaizvo. Mabasa avo anosanganisira kupa kufamba uye kutsigira. Tsandanyama dzepazasi pamagumo, iyo anatomy iyo ichatsanangurwa zvakadzama muchinyorwa, inoonekwa seyakanyanya simba ...
Kazhinji, mushure mekuongororwa, vanachiremba vanopa varwere mushonga "Raunatin". Chii chinodhaka chinobatsira kubva uye chii chinosanganisirwa mukuumbwa kwayo? Mune zviitiko zvipi zvakakosha kutora mapiritsi uye kunogona kurapwa ...
Muviri wechikadzi unonakidza uye wakaomarara. Nekuda kweiyo hormonal kumashure, shanduko dzinoitika mairi mwedzi wega. Iko kudzikama kwemasekondi zvisina kunangana kunoratidza hutano hweakanaka bonde. Asi kazhinji vakadzi vanofanirwa kutendeukira ku ...
Hazviwanzo kugoneka kuongororwa kubva pazvichemo zvemurwere chete, kunyanya kana matambudziko achionekwa kubva kuhurongwa hwetsinga. Computed tomography (tomogram) yemusoro inobvumira kuongorora mamiriro ayo. Iyi ndeimwe ye…
Kuongororwa kweropa rekuzvidzivirira inzira inoshandiswa nevezvokurapa kuona kugona kwemuviri wemurwere kurwisa hutachiona hwakanyanya uye hutachiona. Mhedzisiro yekuongorora inoongorora huwandu hwekudzivirira immune, kuongorora mhando uye ...
Cervical hernia ndeimwe yeakanyanya pathologies anokonzeresa nekupinza isina kukwana simba mutoro pamuviri. Zviratidzo zvechirwere ichi zvakada kufanana muvarwere vese. Munhu anotanga kunzwa kurwadziwa muhuro, musoro ...
Anticholinergics imishonga inovhara chiito chemuyananisi wepanyama, acetylcholine, pane cholinergic receptors. Mumabhuku ekune dzimwe nyika, boka iri remishonga rinodaidzwa kunzi "deliriants" nekuda kwekugona kukonzera kukanganisika. ...
Mushonga "Resorcinol": mirayiridzo yekushandisa
Ndeapi marapirwo ehunhu hwe "Resorcinol"? Mirayiridzo yekushandisa, mapikicha uye maficha emushonga uyu anopiwa pazasi. Maumbirwo, mafomu akagadzirwa Chii chinonzi resorcinol? Mirayiridzo yekushandisa inoti chinhu ichi ...
Cerebral ischemia, sitiroko, chirwere chemwoyo uye encephalopathy inoonekwa sehosha dzakakomba. Ivo vanowanzo kuuraya. Pakati pehuwandu hwakawanda hwehuropi pathologies, encephalopathy inofanirwa kutariswa zvakanyanya. Iri iboka rakakura rezvirwere. Ivo vanozivikanwa ne ...
Hutano hwevanhu hunogara huchiuya pekutanga. Mazuva ano, vazhinji vane fungidziro yekuti mamiriro ekurapa akareba kupfuura kukosha kwawo. Varwere vakadaro vanosarudza kuenda kuzvipatara zvakazvimirira. ...
Mushonga "Biltricid": zvakafanana, mirayiridzo uye wongororo pakurapwa
Helminthiasis ine njodzi uye, zvinosuruvarisa, dambudziko rakajairika iro, kana kurapwa kusipo, kunogona kukonzera matambudziko. Mishonga zvakasikwa inopa mishonga inogona kuchenesa muviri wezvipembenene. Mumwe wavo ...
Mushonga wemushonga senna unoshandiswa mune yechinyakare mushonga senzira yekurapa kuzvimbirwa, pamwe nekubviswa kwezvirwere zvinoda zvituru zvakapfava uye nyore kurasa ura kubva mutsvina. Inoreva ...
Bronchial asthma chirwere chisingaperi chisingarwari chinoratidzwa nekurwisa kwekufema kana kudzipwa. Chirwere ichi chinoitika muvana nevakuru. Gore rega rega huwandu hwevanhu vanotambura nechirwere ichi chiri kukura ...
Wakamboona here kuti une fluid kubva muchipfuva chako? Unofanira kutya here? Kana kuti pamwe ichi chiitiko chinowanzoitika? Ndechipi chirwere chingave chiratidzo chekubuda kubva muchipfuva? Kune ako ese ...
Kwemamireniyoni akati wandei, mazambiringa akwezva kutariswa kwevanhu. Inorimwa munzvimbo dzakasiyana dzepasi uye inogara ichidiwa. Zvakaoma kutsvaga chimwe chirimwa chingawanzo imbwa munhetembo, ngano, nziyo. ...
Mibvunzo ye50 mu database yakagadzirwa mu 0,810 masekondi.